ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူရဲ့လည်ပင်းကို သွေးအေးအေးနဲ့ လှီးရတဲ့ လုပ်ငန်း ~ .
12:05:00 PM ဆောင်းပါး No comments
ဘာလိုလိုနဲ့ အရပ်အခေါ် ဆယ်တန်း၊ ပညာရေး လောက အခေါ် အခြေခံပညာ အဆင့်မြင့် တန်းစာမေး ပွဲ အောင်စာရင်းတွေ ကတော့ ထုတ်ပြန်လို့ပြီးသွားခဲ့ပါ ပြီ။ အောင်သူပြုံးလို့ ရှုံးသူတွေ ငို ကြရတဲ့ စာမေးပွဲ ရလဒ်ထုတ်ပြန် ကြေညာပွဲကြီးလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့။ အခုလောလောလတ်လတ် မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ရဲ့ အနေအထား အရ ဘယ်တက္ကသိုလ်ကို ဆက် တက်မှာလဲဆိုတာကို အဆုံးအ ဖြတ်ပေးတဲ့ စာမေးပွဲ လည်းဖြစ်၊ အခြေခံပညာရဲ့ နောက်ဆုံးဘိတ် လည်းဖြစ်တာမို့ သည်အတန်းက နတ်ကြီးတဲ့အတန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဉာဏ်ရည်အားနည်းသူတွေက အောင်ဖို့၊ အောင်ဖို့ရာ အခက်အ ခဲမရှိသူတွေက ဂုဏ်ထူးများ များ နဲ့ အမှတ်များများရဖို့ အားသွန် ခွန်စိုက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့ အတန်း လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီက မိဘများဟာ သနားစရာ ကောင်းလောက်တဲ့အထိ စားဖို့မရှိရင်နေ၊ သားသမီးကို အကောင်းဆုံးကျောင်းမှာ ထားဖို့ဆို တဲ့အသိနဲ့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျအောင်ကိုပဲ ရင်းကြနှီးကြရရှာတဲ့ အတန်းပါ။ အဲသည့်မှာ လည်လှီးတဲ့ ဆရာတွေပေါ်လာကြတာပဲဆိုပါတော့။
တစ်ခါက သင်္ချာဘာသာ အသင်ကောင်းတဲ့ ဆရာတစ် ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သည်တုန်းက ကျူရှင်တစ်ဝိုင်းကို တစ်ဘာသာတစ်သိန်းလောက် ဈေးပေါက်နေခဲ့တဲ့ခေတ်ပေါ့။ တစ်ဝိုင်းမှာ ကျောင်းသားအ များဆုံး ငါးယောက်လောက်ပဲ လက်ခံကြတဲ့ ခေတ်ပေါ့။ စိတ်နေမြင့် မားသူ ဆရာ၊ ဆရာမအချို့ မိဘများ အပန်းမကြီးရအောင်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ စာသင်သားငါးယောက် မပြည့်ရင်တောင်မှ ငါးယောက် ပြည့်အောင်ရှာဖို့ တိုက်တွန်းကြ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း တီးခေါက်ရှာဖွေ ပေးကြတဲ့အလုပ်မျိုးကို လုပ်ပေး လေ့ရှိကြပါ တယ်။ ကျောင်းသား အရေအတွက်များတော့ လစာကို မျှပေးတဲ့အခါ မပင်ပန်းကြရှာဘူး ပေါ့။
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ သင်္ချာ ဆရာကကျတော့ ၀ိုင်းများလေ ငွေရလေဆိုတော့ကာ ကျောင်းသားငါးယောက် တစ်ဝိုင်းတည်း ဖြစ်နေမှာမျိုးကို အလွန်စိုးရိမ်တဲ့ လူပါ။
၀ိုင်းပွားလေလေ ငွေများ လေလေမို့ စာသင်သားငါး ယောက်တစ်စုတည်းဖြစ်သွားမှာ မျိုးကို သူမလိုလားပါ ဘူး။ တစ် နေရာမှာ လက်ခံထားတဲ့ နှစ် ယောက်ဝိုင်းနဲ့ တစ်နေရာက သုံး ယောက်ဝိုင်းတို့ ဆက်စပ်မိသွား မှာကို အလွန်စိုးရိမ်တဲ့လူပေါ့။ တစ်ခါများဆို စာသင်သားရှာမရ လို့ လေးယောက်တည်းနဲ့ ၀ိုင်းနေ ရတဲ့ အစုထဲကို နောက်တစ် ယောက်ထပ်ရှာလို့ရတဲ့အတွက် ထပ်သွင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါ သတ် သတ်တစ်ဝိုင်းလုပ်ပါ လားဗျာလို့ တောင် သွေးအေးအေးနဲ့ပြော ထွက်တဲ့လူပါ။
သားကောင်ကို လည်လှီးသလို ကျောင်းသားရဲ့ လည်ပင်းကို သွေးအေးအေးနဲ့ လှီးပြီးအောင်သေ၊ အောင် သားစားတဲ့ ဆရာပါလားလို့ ဆိုကာအံ့သြခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်နေ့ရန်ကုန်မြို့လယ်ကို ဖြတ်သွားတော့ အထူးဂရုစိုက် စာသင်ဝိုင်းဆိုတဲ့ ကြော်ငြာ ကလေးတစ်ခုကပ် ထားတာကို သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ ၀ိုင်း ကျူရှင်ဆိုမှတော့ အထူးဂရုစိုက် တာတွေ၊ ဂရုမစိုက်တာတွေ ရှိ သေးလို့လားလို့များ မထင်လိုက် ပါနဲ့။ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
၀ိုင်းကြေးလျှော့ပေးထားပြီး လူကလည်း နည်းနည်းကလေး များနေခဲ့ရင် အဲဒါသာမန်ဝိုင်းဖြစ် သွားပါပြီ။ တတ်တယ်၊ မတတ်ဘူး၊ နားလည်တယ်၊ နားမလည်ဘူး၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်၊ မလုပ်ဘူး၊ မှန်တယ်၊ မမှန်ဘူး၊ အစစ်အဆေးအမေးအမြန်းမရှိ တော့ပါဘူး။ သင်ပြီး ပြီးပြီ စတိုင်လ်။ အဲ . . . ၀ိုင်းကြေးက လည်း စိတ်ကြိုက်ပေးထားပြီး စာသင်သားကလည်း ကန့်သတ် ထားတဲ့ အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့် တစ် ယောက်ချင်း၊ တစ်ကြောင်းချင်း၊ တစ်ပုဒ်ချင်း အနီးကပ်ကြပ်မတ် သင်ကြားလမ်းညွှန်စစ်ဆေးမေး မြန်းပါလေပြီတဲ့။ သည်လိုနဲ့ ဂရု မစိုက်၊ ဂရုစိုက်၊ အထူးဂရုစိုက် ဆိုပြီး ၀ိုင်းအမျိုးအစားတွေ ကွဲ ပြားသွားရလေတာပါတဲ့။ ကိုယ့် ကလေးအထူးဂရုစိုက်တာကို ခံ ချင်ရင် ပိုက်ဆံရှာထား။
ကိုးတန်းစာမေးပွဲတွေပြီးတဲ့ အခါ နောက်နှစ်ဆယ်တန်းကို ရည်မျှော်ပြီး နွေရာသီကိုအကျိုး ရှိရှိ အသုံးချလိုတဲ့ မိဘတွေ ရှိနေ ကြလေသဗျ။ အဲသည့်ခွင်ကို သိတဲ့အခါ ကျူရှင်အချို့က နွေရာသီသုံးလပြတ်တွေ ဘာတွေ လုပ်လာကြပါတယ်။ အပ်ကြပြီပေါ့။ အိမ်မှာ တောင်လိုိလို၊ မြောက်လိုလိုလုပ်နေမယ့်အစား သင်ရိုးတန်း မပြတ်တာတောင်မှ ငါးခန်းပြီးလည်း အမြတ်၊ ခြောက်ခန်းပြီး အမြတ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပေါ့။ ကျောင်းကြိုပို့ယာဉ်နဲ့ ဘာနဲ့။
မိုးဦးကျလို့ စာသင်ကျောင်း တွေ ဖွင့်တဲ့အခါ ကလေးဟာ ကျောင်းမှာ ဘာသာစုံအသစ်ပါ။ ဟိုဟာမြင်ဖူးသ လို သည်ဟာ ကြားဖူးသလိုလိုနဲ့ ယောင်တောင် တောင်ဝါးတားတားပါ။
မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်တော့ နွေသုံးလပြတ်ဆိုတာ သင်ရိုးကို ပြတ်အောင် သင်တာလည်း မဟုတ်၊ တစ်ခန်း ချင်းကို ပြတ် အောင် သင်တာလည်းမဟုတ်။ သင်ရိုးကို အကြမ်းသဘောနဲ့ အပေါ်ယံ ဖြန်းသန်းပြော ပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ကလေးတွေ ပျော်အောင်ထားတာပါတဲ့ခင်ဗျ။ စာသင်နှစ်စတာနဲ့ သူတို့ကျောင်းကို လာချင်အောင်ဆွဲဆောင်ကြတာပါတဲ့ခင်ဗျ။
ပညာကြီးတာ၊ မကြီးတာ အသာထားလို့ နာမည်ကြီးကျူရှင် ဆရာတွေနဲ့ ၀ိုင်းထားတဲ့ ၀ိုင်းတွေ ၀ိုင်းတွေရှိရာ ဆီကို တစ်ခါတ လေရောက်ဖူးပါတယ်။ နာမည် ခံထားတဲ့ သူတွေက ကိုယ်တိုင် သင်ခဲတယ်ခင်ဗျ။ လက်ထောက် ဆရာ၊ တွဲဖက်ဆရာ၊ ဒုတိယ လက်ထောက်တွဲဖက်အကူဆရာ တွေက သူလာသင်လိုက် ကိုယ် လာသင်လိုက်ပါ။ ဆရာကြီး ဘယ်အချိန် လာပါသလဲလို့ မေး ကြည့်တော့ ငွေသိမ်းတဲ့အခါ လာပါတယ်တဲ့။ အံ့ရော။